mother life – Healthy Life Journal
All posts tagged "mother life"
ပါရမီ့ရှင်ရဲ့ မိခင် …
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သောမတ်စ်အက်ဒီဆင် ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းကနေ အိမ်ပြန်လာပြီး သူ့မိခင်ကို စာရွက်တစ်ရွက်ပေးတယ်။ “ဆရာမက သားကို ဒီစာပေးလိုက်တယ်၊ အမေ့ကိုပေးပေးပါတဲ့” စာကိုအော်ဖတ်ရင်း သူ့မိခင်ရဲ့ မျက်လုံးတွေက မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျနေခဲ့တယ်။ “ခင်ဗျားသားက ပါရမီ့ရှင်တစ်ဦးဖြစ်တယ်။ ဒီကျောင်းက သူ့အတွက်...
(၁) ကလေးကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို အချိန်မှန် ကျွေးရပါမယ်။ (၂) ကလေးကို ဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ တီဗီကြည့်ချိန် ကန့်သတ်ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် ဂိမ်းကစားခွင့်မပြုပါနဲ့။ (၃) ညတိုင်း အိပ်ချိန် ၈-၁၀ နာရီခန့် ထားပေးပါ။ ကလေးကို အိပ်ရေးဝ၀ အိပ်ပျော်အောင်...
—၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကလေးမွေးပြီး မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်း တိုက်တာကြောင့် ဘယ်လိုကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိစေနိုင်ပါသလဲ။ PP (FB) A. ကလေးမွေးပြီးတဲ့အခါ ကလေးတွေကို ခြောက်လအထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်း တိုက်ရပါမယ်။ အမေနို့ရဲ ့ပရိုတင်းမှာ...
အသက် ၄၀ ကျော်မှ မိခင်ဖြစ်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အခုခေတ်မှာ အသက်ကြီးချိန်ကျမှ ကလေးမွေးသူတွေ များလာပါပြီ။ ဘဝတက်လမ်းတိုးတက်အောင် ကြိုးစားနေလို့၊ ဘဝအဖော်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုချိန် နောက်ကျနေလို့၊ သားသမီးမယူချင်သေးလို့၊ စီးပွားရှာနေလို့ စတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ အသက် ၄၀ ကျော်အရွယ်ကျမှ မိခင်ဖြစ်လာသူတွေ မနည်းမနောပါ။...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကျွန်တော့်မိခင်မှာ မျက်လုံးတစ်ဖက်ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်မုန်းပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အမေက ကျွန်တော့်အတွက် အတော်လေးစိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာပါ။ သူက ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေအတွက် ထမင်းဟင်းချက်ပေးတဲ့အလုပ်နဲ့ ငွေရှာပါတယ်။ တစ်နေ့ကျတော့ အမေက...
မိခင်မေတ္တာအပြည့်နဲ့ သားသမီး၂၆ ယောက်ကို ဆက်တိုက်မွေးဖွားပျိုးထောင်ခဲ့သူ ဒေါ်ခင်သူဇာ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အသက် ၁၈နှစ်ကျော် အရွယ်ကတည်းက စတင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်ကြီးတစ်နှစ်ငယ် သားသမီး၂၆ယောက်ကို မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ဒေါ်ခင်သူဇာဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးမြင့်ဝေနဲ့အတူ သားသမီးတွေကို ကျန်းမာစွာ အရွယ်ရောက်ကြီးပြင်းလာတဲ့အထိ မိခင်မေတ္တာအပြည့်နဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ “အန်တီက အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့...
မိခင်ဘဝအတွက် အကောင်းဆုံးအရွယ်ကို သိပ္ပံပညာရှင်တို့ထောက်ပြ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် သားသမီးပြုစုပျိုးထောင်ရတာက တန်ဖိုးရှိပြီး အံ့သြပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ ကာလဖြစ်သလို စိတ်ခေါ်မှုတွေ၊ ပူပင်သောကတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုစိတ်ခံစားမှုအမျိုးမျိုးကို ကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အရွယ်က အသက် ၃၅ နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာမှုအသစ်က ဆိုလိုက်ပါတယ်။ အသက် ၃၅နှစ်ကျော်ပြီးချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာက...
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ သားသမီးရတနာ ယူတော့မယ်ဆိုရင် ကလေးကို မလိုချင်ဘဲ မယူသင့်ပါဘူး။ ကလေးကို မိခင်က ချစ်မြတ်နိုးမှ ကျန်းမာသွက်လက်ပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်တဲ့ ကလေးကို မွေးဖွားနိုင်မှာ ဖြစ်လို့ပါ။ နောက်အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မယ့် အမျိုးသမီးက- –...